Abavelisi beemveliso eziphambili kunye nababoneleli - iTshayina yeeMveliso eziPhambili
I-Thrie umqadi wokugcina
Indawo yokugcina izinto ikakhulu ukulandela i-AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 kunye ne-EN1317 esemgangathweni. Izinto ezenzelwe ikakhulu i-Q235B (S235Jr amandla esivuno angaphezulu kwe-235Mpa) kunye ne-Q345B (S355Jr amandla okuvelisa angaphezulu kwe-345Mpa). Ngobunzima be-guardrail ikakhulu nge-2.67mm ukuya kwi-4.0mm. Unyango lomphezulu lushushu lwathi nkxu, ukulandela i-AASHTO M232 kunye nomgangatho olinganayo ofana ne-AASHTO M111, EN1461 njl.njl.
Indawo yokugcina izinto ikakhulu ukulandela i-AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 kunye ne-EN1317 esemgangathweni. Izinto ezenzelwe ikakhulu i-Q235B (S235Jr amandla esivuno angaphezulu kwe-235Mpa) kunye ne-Q345B (S355Jr amandla okuvelisa angaphezulu kwe-345Mpa). Ngobunzima be-guardrail ikakhulu nge-2.67mm ukuya kwi-4.0mm. Unyango lomphezulu luyatshiswa kwalenza, ukulandela i-AASHTO M232 kunye nomgangatho olinganayo ofana ne-AASHTO M111, EN1461 njlnjl.
Isiphelo sesiphelo ikakhulu silandela i-AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 kunye ne-EN1317 esemgangathweni. Izinto ezenzelwe ikakhulu i-Q235B (S235Jr amandla esivuno angaphezulu kwe-235Mpa) kunye ne-Q345B (S355Jr amandla okuvelisa angaphezulu kwe-345Mpa). Ukutyeba kwesiphelo sendlela ikakhulu kwi-2.5mm ukuya kwi-4.0mm okanye ukulandela iimfuno zabathengi. Unyango lomphezulu lushushu lwathi nkxu, ukulandela i-AASHTO M232 kunye nemigangatho elinganayo efana ne-AASHTO M111, EN1461 njl njl.
Iibholiti zichazwe kwi-ANSI B1.13M yeBanga 6 ukunyamezelana. Izinto zeBolt zihambelana ne-ASTM F568M kwiKlasi 4.6. Izinto eziphathekayo kwiibholiti ezingamelana nokubola zihambelana ne-ASTM F 568M kwiCandelo 8.83. iibholiti. Unyango lomphezulu luya kulandela i-AASHTO M232. Ubungakanani obuqhelekileyo bewashi yi-76 * 44 * 4mm, kwaye sinokulandela imizobo evela kumthengi. Kwisikhombisi umbala uhlala umhlophe, ubomvu, kwaye utyheli, ungazixuba ngokwakho. Izitshixo kunye namandongomane zijolise ekuqiniseni unogada ...